हरे शिव ! ८१ बर्षीय बृद्ध बुबाले ५३ बर्षिय छोरालाइ सांग्लोले बाँधेर पाल्दै, धुरु धुरु रोए बृद्ध बुबा (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
हरे शिव ! ८१ बर्षीय बृद्ध बुबाले ५३ बर्षिय छोरालाइ सांग्लोले बाँधेर पाल्दै, धुरु धुरु रोए बृद्ध बुबा (भिडियो सहित)
मोरंग । सुन्दा सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ मोरंग जिल्ला मधुमल्लामा बस्ने कृष्ण कार्कीलाइ बिगत ५ बर्ष देखि फलामको सांग्लोले बाँधेर राखिएको छ । ८१ बर्षिय बृद्ध बुबालेनै ५३ बर्षिय कृष्णलाइ हेरविचार गरिरहनुभएको छ । अहिले ५३ बर्षको उमेर पुगेका कृष्ण कार्की परिवारका जेठा छोरा हुन् भने अरु २ जना कृष्णका भाइहरु हुन् ।